Buyingasafe home in Myanmar - A haven for the body, mind and soul
In today’s world, we are exposed toamyriad of toxic products. Besides causing sluggishness and raising irritability, these toxic products also weaken the body organs. A detox retreat isanecessary step to heal your body and mind.
There are multiple benefits of detox retreat which helps body refresh, boost energy levels, helps weight loss and enhance digestive system. Some wellness experts introduce detox retreat programs varies from your own health goals. However, the community and residents at Pun Hlaing golf estate are able to enjoy daily detox without leaving their homes!
Residents can enjoyagreen lifestyle by ordering farm to table items from the Horizons Restaurant or Oasis Bistro; they can work with our food & beverage teams to customizeameal plan to suit their dietary goals. They can continue an active lifestyle by joining the country club or golf club.
They can partake in tennis, yoga or meditational classes, or practice Qigong in the urban forest. They can walk or jog at the estate; bask in the sun in the outdoor pool or exercises in the gym indoors during the monsoon. Participating in community activities contributes to social wellbeing. There’s no better way to relax the tired muscles at the garden spa that offersawide selection of therapeutic treatments.
If you would like to experience what it’s like to live in Pun Hlaing Estate before buyingahouse, you can also purchaseastaycation package to haveataste of what it would be like to live in Pun Hlaing Estate.
A much better alternative is to meet the estate management team and residents at the monthly morning coffee/tea. Contact Phyo Ei Khine at phyoeikhine@yomaland.com to arrangeaprivate viewing session with our lifestyle specialists. Viewing strictly by appointment only.
ယနေ့ခေတ်မှာ လူတွေကခန္ဓာကိုယ်အတွက်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုသုံးစွဲလာကြတာနဲ့ အမျှ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုပါ ခံစားကြရမှာပါ။ အသွားအလာ နှေးကွေးလေးလံလာခြင်း၊ ဒေါသ ဖြစ်လွယ်ခြင်း၊ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အားနည်းစေခြင်း အစရှိသည့်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားနေကြရပါသည်။ ထိုသို့ခံစားနေရပြီဆိုလျှင် အဆိပ်အတောက်ထုတ်ပြီးပြန်လည်ကုသသော detox retreat သည် သင့်စိတ်ရော ခန္ဓာကိုယ်ပါကောင်းမွန်စေဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။
အဆိပ်အတောက်ထုတ်ပြီးကုသသော detox retreat သည် ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာလန်းဆန်းစေခြင်း၊ အားအင် ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးခြင်း၊ အဆီပိုများလျှော့ချပေးခြင်း၊ အစာချေစနစ်ကောင်းမွန်စေခြင်း အစရှိသည့် ကောင်းကျိုးများစွာရှိပါသည်။ တချို့ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများက ထိုကုသနည်းအတွက် မိမိစိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်နိုင်သောအစီအစဉ် အမျိုးမျိုးထားရှိထားပါသည်။ သို့ရာတွင် ပန်းလှိုင်အိမ်ရာအတွင်း နေထိုင်သူများ အနေဖြင့် မိမိအိမ်အတွင်းမှာပင် ထိုအဆိပ်အတောက်ထုတ်ကုသသော detox retreat ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Horizons Restaurant နှင့် Oasis Bistro မှ အသီးအရွက်များမှာ ကိုယ်ပိုင်စိုက်ခင်းထဲမှ ခူးယူပြီးပြင်ဆင်ထား သောကြောင့် သဘာဝကိုတန်ဖိုးထားသော လူနေမှုပုံစံကို ခုံမင်သူများအတွက် အထူးသင့်တော်ပြီး ဝန်ထမ်း များမှလည်း မိမိတို့စားနေကျ အစားအသောက်ထိန်းသိမ်းမှုပုံစံအတိုင်းရရှိစေရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါ သည်။ တက်ကြွသော လူနေမှုပုံစံကို ကြိုက်နှစ်သက်သော အိမ်ရာတွင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့် Country Club နှင့် ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းတွင်လည်း ရေကူးခြင်း၊ ဂေါက်ရိုက်ခြင်းအစရှိသည်တို့လုပ်နိုင်ပါသည်။
ထို့ပြင်အိမ်ရာတွင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့် တင်းနစ်ကစားခြင်း၊ ယောဂလေ့ကျင့်ခြင်း၊ စိတ်တည်ငြိမ်အောင် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းအစရှိသည်တို့ကို ပန်းလှိုင်အိမ်ရာအတွင်းရှိတောအုပ်ကဲ့သို့စိမ်းစိုသော နေရာများ တွင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အိမ်ရာအတွင်း လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပြေးခြင်းတို့ကိုလည်း အနှောင့်အယှက်ကင်းစွာ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ရေကူးကန်ဘေးတွင်နေပူဆာလှုံခြင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာစုံလင်သောအားကစားခန်းမတွင် အားက စား လေ့ကျင့်ခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အိမ်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှလည်း အိမ်ရာတွင်း နေထိုင်သူများစိတ်ပျော်ရွှင်တက်ကြွစေရန် အသင်းအဖွဲ့အလိုက်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း စဉ်ဆက် မပြတ် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။ သင်၏တောင့်တင်းနေသော ကြွက်သားများကို ဖြေလျော့စေရန် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းမှာ ပန်းဥယျာဉ်အတွင်းရှိ spa တွင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ spa treatment ကို ခံယူပြီး သဘာဝအရသာ ကို ခံစားကာ အပန်းဖြေနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာတွင်အိမ်မဝယ်ယူမီ အိမ်ရာတွင်းရှိ ကောင်းမွန်သောပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု တို့ကို ကိုယ်တိုင်ခံစားလိုပါက staycation package ဝယ်ယူပြီး ပန်းလှိုင်အိမ်ရာတွင် ခေတ္တခဏ လာရောက် နေထိုင်ကြည့်ရန်တိုက်တွန်းပါသည်။